ब्रिटेन व्यापारीको एक असाधरण अन्तरिक्ष उडान - ढोरपाटन पोष्ट
भर्जिन गलाक्टिकले आफ्नो उक्त उडान अनलाइनमा प्रत्यक्ष देखाउँदैछ।
२०७८ असार २७, आईतवार १९:४०
ब्रिटेनका व्यापारी सर रिचर्ड ब्रानसनले आफ्नो जीवनको एउटा ठूलो लक्ष्य अन्तर्गत अन्तरिक्षको नजिकै पुग्ने सपना साकार पार्दैछन्। आफ्नो कम्पनी भर्जिन गलाक्टिकको रकेटमार्फत् ब्रानसन आइतवार त्यस्तो उचाइमा पुग्नेछन् जहाँ आकाश कालो हुनेछ र पृथ्वीको क्षितिज घुमाउरो देखिनेछ।
यी उद्यमीले अर्को वर्ष पैसा तिरेर जाने सेवाग्राहीलाई त्यस्तो यात्रामा लैजानुअघि आफैले उक्त अनुभवको समीक्षा गर्ने बताएका छन्। उक्त यान डेढ घण्टा लामो आफ्नो मिसनमा नेपाली समय अनुसार दिउसो ६ बजेर ४५ मिनेट जाँदा न्यू मेक्सिको माथि उड्नेछ।
भर्जिन गलाक्टिकले आफ्नो उक्त उडान अनलाइनमा प्रत्यक्ष देखाउँदैछ। यस विन्दुमा पुग्नका लागि सर रिचर्डले लामो यात्रा तय गरेका छन्। सबैभन्दा पहिले उनले सन् २००४ मा अन्तरिक्ष हवाईजहाज बनाउने आफ्नो मनसाय सार्वजनिक गरेका थिए।
त्यसबेला उनले सन् २००७ मै व्यावसायिक सेवा सुरु गर्ने अपेक्षा राखेका थिए। तर उडानको विकास गर्ने क्रममा सन् २०१४ मा भएको एउटा घातक दुर्घटना सहितका प्राविधिक कठिनाइहरू आए।म बच्चा छँदादेखि अन्तरिक्षमा जान चाहन्थेँ। र मैले आउँदो सय वर्षमा लाखौँ अन्तरिक्षमा पुगेको हुने आशा राखेको छु,” बीबीसीसँग उनले भने।
“र उनीहरू नजाउन् पनि किन? अन्तरिक्ष विलक्षण छ; विश्व शानदार छ। म मानिसहरू सुन्दर पृथ्वीलाई हेर्न सकुन् र घर फर्केर त्यहाँ निकै मिहिनेत गर्दै चमत्कार गर्न सकुन् भन्ने चाहन्छु।”
कसरी हुनेछ अन्तरिक्ष उडान?
युनिटी नाम दिइएको उक्त यानलाई एउटा निकै ठूलो विमानमार्फत् १५ किलोमिटरमा लगेर छाडिनेछ। ब्रानसनसाथ दुई पाइलट र तीनजना चालकदल सदस्य हुनेछन्
त्यसपछि युनिटीको पछाडिपट्टि रहेको एउटा रकेट मोटरलाई प्रज्वलित गरी यानलाई आकाशतर्फ धकेलिनेछ। उक्त मोटर ६० सेकेन्डसम्म जल्दाखेरि सर रिचर्ड, उनका तीन जना चालक दल र दुईजना पाइलटले तलपट्टि पृथ्वीको गज्जबको दृश्य देख्नेछन्।
स्रोत: विश्व घटना आनलाइन